Microsoft Translator yakagadziridzwa ichiwedzera mashandiro matsva nemitauro | IPhone nhau
Microsoft Translator yakagadziridzwa ichiwedzera mashandiro nemitauro mitsva
Iko kunyorera kwakatangwa neMicrosoft pamusika zvishoma pamusoro pegore rapfuura, Microsoft Translator, kuti ive imwe nzira kuGoogle Dudziro, ichiri kurarama kupfuura nakare kose kunyangwe hazvo vashandisi vazhinji nhasi vachishandisa chete kushandiswa kweGoogle. Mavhiki mashoma apfuura ndakaburitsa chinyorwa umo ini ndakakuratidza maitiro atingaite shandisa Microsoft Translator kududzira mawebhusaiti ari mune chero mumwe mutauro pasina kusiya browser, nekuda kwekuwedzera kunopihwa neichi chishandiso, ichiva nzira inokurumidza kwazvo yekududzira chero peji rewebhu. Iri basa rakanakira kune vese avo vanomanikidzwa zuva nezuva kana kazhinji kutarisa mapeji ewebhu mune mimwe mitauro.
Microsoft ichangobva kugadzirisa izwi rimwe chete kana shanduro yekushandura zvinyorwa kuwedzera Chinese dudziro pasina kudikanwa kwekubatanidza internet, sekungopihwa kwatakaita neGoogle application kwenguva yakareba, zvinova zvinowanzova piyona mukuunza zvinhu zvitsva mundima iyi, sezvazvinoita neGoogle Maps application. Nenzira, yave ichishandiswa kugadzirisa zvese kutanga kwechikumbiro uye mashandiro, nenzira iyi application inoita shanduro uye inogadzirisa mibvunzo nenzira inokurumidza uye yakapusa.
Neimwe neimwe nyowani nyowani, vanogadzira vanoshandisa mukana we gadzirisa maduku maduku kuti chishandiso chingave chiine, zviputi zvinogona kunge zvakataurwa nevagadziri kana zvakawanikwa nekambani pachayo. Microsoft yatora mukana weichi chiitiko chitsva kugadzirisa matambudziko nekushanda pamwe nemutauro wemuno wechigadzirwa, zvakanyorwa zvisingawanikwe munhoroondo, kudamburwa kwekutaurirana kwekukurumidza ... Inofanira kuyeukwa kuti chishandiso ichi chinoenderanawo iyo Apple Watch, iPhone, iPad uye iPod touch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Microsoft Translator yakagadziridzwa ichiwedzera mashandiro nemitauro mitsva
Kutanga Center, Astro 3D uye mimwe mitambo uye maapps ari kutengeswa kwenguva shoma
Apple inobata iyo iCloud.net dura uye inovhara pasocial network pasi penzvimbo iyoyo